विप्लवको ‘विशेष’अन्तर्वार्ता : पार्टी एकिकृत जनक्रान्ति हाक्न सक्षम छ ! – ejhajhalko.com
विप्लवको ‘विशेष’अन्तर्वार्ता : पार्टी एकिकृत जनक्रान्ति हाक्न सक्षम छ !
८ मंसिर २०७६, आईतवार ०९:४५ 640 पटक हेरिएको
पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको के महत्व छ रु प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
ठीक भन्नुभयो । यसपटकको पुनर्गठन दिवस क्रान्तिको मोर्चाभित्र, दमन र विद्रोह, प्रतिबन्ध र प्रतिरोध, प्रतिरोध र बलिदान, क्षति र उपलब्धिहरूबीच मनाउँदैछौँ । हामीले यो पार्टी पुनर्गठन गरेर एकीकृत जनक्रान्ति अगाडि बढाएपछि कमरेड कुमार पौडेल, कमरेड नीरकुमार, कमरेड महानसहित एक दर्जन नेता, कार्यकर्ता, कमान्डर र सदस्यहरू सहिद हुनुभएको छ । कमरेड सुदर्शन, कमरेड वीरजङ्गसहित सयौँजना कमरेडहरू जेल–हिरासतमा बन्दी हुनुहुन्छ । दर्जनौँ कमरेडहरू घाइते हुनुहुन्छ । हजारौँलाई मुद्दा लगाइएको छ । यस्तो नयाँ परिवेशमा यो दिवस मनाउँदैछौँ । त्यसैले हाम्रो आठौँ पूर्ण बैठकले विगतमा भन्दा अरू सशक्त प्रकारले मनाउने निर्णय गरेको छ । मङ्सिर ५ गतेदेखि ८ गते ९चार दिनसम्म० प्रचारप्रसार, सहिद तथा बेपत्ता परिवारसँगको भेटघाट, बन्दी कमरेडहरूसँगको भेटघाट, जनतासँग अन्तरक्रिया, खेलकुद र खुसीयाली साटासाट गर्दै मनाउँदैछौँ । म सबै नागरिकहरूलाई यो उत्सवमा सहभागी बन्न आग्रह गर्दछु ।
हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले निकै महत्वपूर्ण निर्णय लिएको जानकारी प्रेसविज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ । वक्तव्यले तरङ्ग पनि ल्यायो । यहाँ पनि केपी सरकार र देशको अवस्थाबारे छोटोमा विश्लेषण राखिदिनुस् न ?
नक्सा बाहिर आएपछि नेपाली जनतामा राष्ट्रप्रेम र स्वाभिमान छचल्कियो । रातारात युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, देशभक्त नागरिक सङ्घर्षमा उत्रिए । हाम्रो पार्टीले एकहप्ते सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी भए । विडम्बना, केपी सरकारले हाम्रा विद्यार्थी, युवा, बुद्धिजीवीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन, विरोध प्रदर्शन गर्न, जुलुस लगाउन र सभा गर्न पनि दिएन । सयौँजना साथीहरूलाई गिरफ्तार गरेर देशद्रोहको मुद्दा चलाएको छ । के यो केपीको दलाल चरित्र होइन १ यसले त केपी सरकारले बाहिर भारतको विरोध गरेको जस्तो गरेर जनताको आक्रोशलाई मत्थर पार्ने र भित्रबाट भारतकै स्वार्थ पूरा गरिदिने दलाली काम गरेको प्रस्ट हुन्छ । यसको हामी कडा रूपमा भत्र्सना गर्दछौँ ।
हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै देशको स्वाधीनताका पक्षमा सहमत हुनेजति सबै कम्युनिस्ट, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, बुद्धिजीवी मित्रहरूसँग संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने नीतिमा जोड दिँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा सफल पनि भइएको छ । अहिले पनि त्यसको राम्रो सम्भावना छ । कमरेड ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, वैैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, नेकपा ९क्रामा० सहितका पार्टीहरूसँग छलफल गरेर सयुक्त सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ ।
संसद्वादी पार्टीहरूले त कूटनीतिक र राजनीतिक पहलबाट भारतसँगका सीमा समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने मत राखिरहेका छन् । के त्यसरी हल हुने देख्नुहुन्छ रु अथवा कसरी हल हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
कब्जा गर्दाको पनि कस्तो अनौठो तर्क छ हेर्नुस् न, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सामरिक महत्व भएकाले अर्थात चीनलाई परसम्म हेर्न सकिने भएकाले उसलाई चाहियो रे १ हेपाइको पनि सीमा हुन्छ १ भारत र चीनको सीमा हजारौँ किलेमिटरमा छ । चीनले भारतलाई लखेट्दा यहाँबाट भन्दा अन्यत्रबाट लखेटेको थियो अनि यही नेपाली चुच्चोबाट चीनलाई हेर्नुपर्छ रु पुँजीवादी–साम्राज्यवादीको चरित्र जन्मजात हिंश्रक हुन्छ । चीनले सीमा मिच्यो भनेर दिनरात कराउने भारतले हाम्रो सीमा लाजै पचाएर किन मिच्ने रु भारतले अतिक्रमित भूमिबाट आफ्नो सेना फर्काउँदैन भने नेपाली सेनालाई सीमारक्षामा खटाउनुपर्छ । तर केपी सरकारको बुताभित्र यो छैन । हामीले भनेका छौँ नि देशको स्वाधीनताको रक्षाका लागि पनि वैज्ञानिक समाजवाद आवश्यक छ ।
विश्व भूमण्डलीकरण भैरहेको अवस्थामा तपाईंहरूले क्रान्तिको कुरा गरिरहनुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँग तपाईंको केकस्तो सम्बन्ध रहेको छ रु अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबिना नेपालमा क्रान्ति सम्भव छ त ?
समग्रमा देशभरि पार्टीको अवस्था के छ रु जनता र मित्रहरूको बुझाइ कस्तो पाउनुभएको छ ?
धु्रवीकरणबारे हामीले क्रान्तिकारी शक्तिहरूबाट सकारात्मक धारणा पाएका छौँ । केही पार्टीका पत्र प्राप्त भएका छन् भने केहीसँग छलफल चलिरहेका छन् । धु्रवीकरणबारे हामीले तीन विकल्प अघि सारेका छौँ स् एउटै पार्टी बनाउने, संयुक्त मोर्चा बनउने र कार्यगत एकता गर्ने । कार्यगत एकता त भइरहेकै छ । अन्य विषयमा केही मेहनत गर्नुपर्ने छ तर असम्भव छैन ।
यो अलि फरक र संवेदनशील विषय छ । महराले निजी जीवनमा गरेका कमजोरी के हुन्, महिलाले नै भनेपछि अरूले धेरै बोल्ने कुरा भएन तर म ठोकेर भन्छु महरा मामिला केवल नैतिक र महिलाको मामिला मात्र भएन । सम्भोगलाई राजनीतिक मामिला बनाएको जस्तो लाग्छ । पुँजीवादी पार्टीहरूभित्र यस्ता सम्बन्ध नहुने कमै होलान् १ राष्ट्रपति सीको भ्रमणको बेलामा नै यसलाई उठाउनु, वलीले अमेरिकी कार्यक्रम एमसीसी रोक्ने महरा नै हो र गल्ती गरेका छन् भन्नु, प्रचण्डले अदालतमा रहेको मुद्दाबारे महराले नै गल्ती गरेका हुन् भनेर ठोकुवा गर्नु, यूएन, युरोपियन युनियनलगायतले वत्तःव्य दिएर कारबाहीको माग गर्नु यसका दृष्टान्त हुन् ।
हो, यो प्रचार गरिन्छ । हामीले उल्लिखित परिवर्तन भएका छैनन् भनेर कहाँ भनेका छौँ र रु हामीले भनेको त सामन्तवाद गयो, गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो तर यी परिवर्तन श्रमिक जनताका लागि भएनन्, दलाल पुँजीपति वर्गका लागि भए । हामीले जनयुद्ध लडेको, क्रान्ति छेडेको त उत्पीडित वर्ग, समुदाय र देशको पूर्ण स्वाधीनताका लागि हो । एउटा लुटेराको सट्टा अर्को लुटेरालाई, एउटा ठगको ठाउँमा अर्को ठगलाई, एउटा हत्याराको सट्टा अर्को हत्यारालाई, एउटा दलालको सट्टा अर्को दलाललाई, एउटा चोरका ठाउँमा अर्को डाँकालाई सत्तामा विराजमान गराउन होइन नि । सामन्तवाद गएर जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने भनेकोमा दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र खडा भएपछि यो गणतन्त्र श्रमिक जनताको रक्षा र समृद्धि गर्ने गणतन्त्र भएन, दलाल पुँजीपति वर्गको रक्षा र समृद्धि गर्ने गणतन्त्र भयो । यो सङ्घीयता उत्पीडित समुदायको सङ्घीयता नभएर दलाल पुँजीपतिहरूको सङ्घीयता भयो । सयौँ वर्षदेखि दबिएका र शोषित भएका श्रमिक जनता त अहिले पनि शोषित, उत्पीडित नै छन् । धर्मजस्तो जनविरोधी, अन्धविश्वासी, असत्य विषयको चर्चै नगरौँ । धर्म भनेका सबै श्रमिक जनतालाई अन्धो बनाउने र अन्धकारमै थुनिराख्ने मन्त्र हुन् । धर्मको अन्धोराज जहिलेसम्म चल्छ उत्पीडित जनताले जीवनमा उज्यालो कहिल्यै भेट्टाउन पाउने छैनन् ।
हामीले यश अन्तर्वार्ता लाई इराताे खबर अन्लाईन बाट लिएका हाैंउ ।